eHealth (EHTH) Q4 2019 Earnings Call Transcript | Modọ nzuzu na - adịghị ọcha - na - agabiga
Ebe e si nweta ya: Nlegharị Motley.
Oku Akpata Q4 2019
Feb 20, 2020, 5: 00 pm ET
Kpọọ Ndị Soro
Iesmụ nwanyị na ụmụ nwanyị, a na-ekele gị maka iguzo n'akụkụ, ma nabata oku Q4 na afọ zuru ezu 2019 eHealth, Inc. [Ntụziaka maka onye ọrụ] Biko, dụọ ọdụ ka a na-edekọ ogbako taa. Aga m achọ inyefe onye na - ekwu okwu gị oku ugbu a, Ms.
Kate Sidorovich, onye osote onye isi ala nke mmekorita ndi mmadu. Daalụ. Biko gaa n'ihu, ma'am.
Kate Sidorovich - Onye isi ala nke Mmekọrịta Mmekọrịta
Daalụ. N'ehihie ọma ma kelee gị niile maka ị sonyere anyị taa site na ekwentị ma ọ bụ site na webcast maka mkparịta ụka banyere nsonaazụ ego nke anọ na afọ 2019. N’elu oku n’ehihie a, anyị ga-enwe Scott Flanders, onye isi ndị isi ala; na Derek Yung, onye isi ndị isi ego. Mgbe njikwa rụchaa nkọwa ya, anyị ga-emeghe ajụjụ maka ajụjụ.
Dị ka ihe ncheta, a na-edekọ oku nzukọ taa na webcast site na ngalaba IR nke weebụsaịtị anyị. Ntugharị nke oku ahụ ga-adị na weebụsaịtị anyị na-esochi oku a. Anyị ga na-eme nkwupụta na-elele anya na oku a na-agụnye nkwupụta gbasara ihe omume ga-eme n'ọdịnihu, nkwenye na atụmanya, gụnyere nkwupụta metụtara atụmanya gbasara azụmaahịa Medicare, gụnyere mmụba ntinye akwụkwọ Medicare, arịrịọ ndị ahịa; uru asọmpi anyị; òkè anyị nke mkpokọta Medicare na Ntinye uru Medicare na uto na ntinye aha ịntanetị Medicare; atụmatụ uto Medicare anyị na itinye ego na azụmaahịa Medicare, tinyere itinye ego anyị n'ọrụ ike nke ịsa, atụmatụ ịme ahịa na usoro teknụzụ anyị na ike anyị; atụmanya anyị gbasara uru ahịa anyị, oge a na-akwụ ụgwọ, ihe eji arụ ọrụ, ụbọchị ndụ, ọnụego njigide na ọnụ ahịa inweta; atụmatụ anyị banyere data ndụ anyị nke atụmatụ Medicare na atụmanya anyị na nkwalite usoro atụmatụ atụmatụ ndụ nke Medicare ga-enye amụma ga-eburu amụma nke nnata ego; na ngwụcha, ntụzịaka na afọ 2020 anyị maka afọ mbụ nke 2020, gụnyere atụmatụ anyị na ike anyị iji nye anyị nduzi. Nkwupụta nlegharị anya na oku a na-anọchite anya echiche ndị otu ahụike ka taa.
Ekwesighi ịdabere na nkwupụta dị ka ihe na-anọchite anya echiche anyị n'ọdịnihu. Anyị enweghị ọrụ ma ọ bụ ọrụ ọ bụla iji melite ozi dị na nkwupụta ndị a na-ele anya, ma ọ bụ n'ihi ozi ọhụrụ, ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu ma ọ bụ na ọ bụghị. Nkwupụta ihu na-elegide anya na-ebute ihe egwu na ejighị n'aka nke nwere ike ibute nsonaazụ ọ bụla dị iche n'ụzọ anụ ahụ na atụmatụ ahụ na nkwupụta anyị. Anyị na-akọwa ihe ndị a na ihe ize ndụ ndị ọzọ na ejighị n'aka na akụkọ anyị kwa afọ na Form 10-K na akụkọ ụzọ n'ụzọ anọ na Form 10-Q gbara akwụkwọ na Securities na Exchange Commission, ị nwere ike ịnweta site na mkpokọta SEC ma ọ bụ na ngalaba Akụ Mmekọ nke weebụsaịtị anyị. .
Anyị ga na-ewetara ụfọdụ ego ego na oku a na-ahụta na-abụghị nke GAAP n'okpuru SEC Regulation G. Maka mmezi nke usoro ego na-abụghị nke GAAP dị ka nke ego GAAP nke dabara adaba, biko rụtụ aka na ozi etinyere na ntọhapụ anyị ewepụtara. taa na na SEC filings anyị, nke enwere ike ịchọta ya na ngalaba Anyị, nke weebụsaịtị ụlọ ọrụ anyị n'okpuru isiokwu Mmekọrịta. N'oge a, m ga-aghọrọ oku Scott Flanders.
Scott Flanders - Onye isi oche
Daalụ, Kate, n’ehihie ọma, mmadụ niile. 2019 bụ afọ ndekọ maka ahụike, akara aka site na ntinye aha siri ike kwa afọ na akụkọ ụlọ ọrụ anyị na nsonaazụ ego nke ukwuu gafere ntuziaka anyị kwa afọ 2019 gafee ọtụtụ igwe ọkụ, gụnyere ego nnata ego, GAAP net, ma gbanwee EBITDA. Oke oha edebanye aha nke Medicare gabigara ihe anyi choro na uzo ato mbu nke afo ma wulite anyi karia okpukpu abuo nke telesales nke na-abanye n'ime AEP ma obu otua gara aga na itinye ezigbo ego na atumatu ahia na teknụzụ. Etinyela ego ndi a n’egosi oke oyuyo dika anyi nwetara uto 88% na ndi otu ndi Medicare anabatara na ano nke ano n’aho 2019 ma o buru otu afo gara aga.
Uto na nkebi nke anọ nke afọ 2019 ka akwadoro maka ngwaahịa Medicare Advantage siri ike na 100%. Anyị mezuru ọkwa ndị a dị elu na ntanetị ọnụego dị ọnụ ahịa dịka egosiri na mgbasawanye oke ọnụ dị ka atụnyere 2018. Ihe dị oke mkpa bụ mmụba nke afọ 200% na ntanetị nke anọ na ntanetị nke Medicare nyefere na ntanetị, nke na-anọchite anya ngwakọta nke ndị ọrụ ntanetị na ntanetị anaghị enyere aka na ntinye aka. Ndị ahịa anyị webatara pasent 36% nke anọ maka ọgwụ Medicare, gụnyere Medicare Advantage na atụmatụ mgbakwunye Medicare, mmụba bara uru ma e jiri ya tụnyere 22% afọ gara aga.
N'okpuru nke a, ndebanye aha ntanetị na-akwadoghị, ebe ndị ahịa na-ejikọghị otu n'ime ndị ahịa ahịa anyị aka, toro 107%, ebe enyemaka ndị ntinye aka na-eto karịa 280% na nkeji nke anọ ma e jiri ya tụnyere Q4 nke 2018. Ọrụ anyị nke anọ nke anọ nyere anyị ohere gbagoro anya n’uzu n’azu n’afọ 2019 nke ndị ahịa na-emecha 20% nke ịdenye aha ịgwọ ọrịa Medicare n’ịntanetị, n’ezie ntinye aka na ntanetị na-abata na 27%. Mpempe ndị a bụ nkwado siri ike nke usoro azụmaahịa nke azụmahịa anyị na akụkụ ngwa ngwa na-eto ahịa ndị ahịa Medicare ọ bụghị naanị na-enwe ntụsara ahụ transacting n'ịntanetị kama ọ ga-achọwanye ikike a na nhọrọ kachasị, ahụmịhe ntanetị na-eji ngwa ahịa, dị ka mgbanwe ahụ hụrụ na ndị ọzọ na-eche ihu na vetikal, dị ka azụmaahịa azụmaahịa, ahia na ebe ahia. Anyị na-eme ka usoro a dị ngwa maka itinye aka dijitalụ na ahịa Medicare na itinyekwu ego na ahịa ịzụ ahịa na ndebanye aha anyị, nzukọ ndị okenye ebe ọ bụla kachasị mfe na kachasị mma ka ha sonyere anyị, ntanetị ma ọ bụ ekwentị.
Industrylọ ọrụ anyị NPS scores nọ na ntanetị 80s ruo 90s, na-egosi uru anyị na-enye ndị ahịa anyị na-agbasa ngwa ngwa. Ebumnuche pụrụ iche nke ahụike eHealth nyere anyị ohere itolite otu ndi Medicare na-atụ anya na ọnụego nke okpukpu iri-na-eto uto nke ahịa Medicare n'ogo na itolite otu anyị na-ahụta na Medicare Uru na oge ise nke ọnụego ahịa Medicare Advantage. N'ịgbanwe ngwa ngwa na ndị mmadụ na ezinụlọ na obere azụmaahịa, ndị otu a nwapụtara maka ngwaahịa na atụmatụ ezinụlọ na-eto 14% n'oge nkeji nke anọ nke 1 ma e jiri ya tụnyere nkeji nke anọ n'afọ gara aga. Nke a bụ n'usoro dị mkpa ịdenye aha afọ mgbe afọ gafere na ahịa dị obosara n'oge ndebanye aha mepere emepe ma gosipụta nkwado anyị na-aga n'ihu na azụmaahịa Medicare na itinye ego ahịa anyị.
Ndị otu ndị a nabatara maka obere otu ndị otu azụmaahịa dara 16% n'oge nkeji nke anọ ma e jiri ya tụnyere otu ụzọ n'ụzọ anọ n'afọ gara aga ka anyị lekwasịrị anya na ndị otu dị elu, ebe anyị na-elele otu dị nta, uru dị ala. Na mgbakwunye na nsonaazụ arụmọrụ anyị siri ike, ego nke anọ na afọ anọ na-egosipụta mmetụta dị mma nke $ 42.3 nde na nnata, na-esite na mgbanwe na atụmatụ maka mkpokọta ndị ọrụ ego na-atụ anya metụtara ụfọdụ atụmatụ Medicare Advantage anyị dị ugbu a. N’ọnwa gara aga, mgbe anyị wepụtara nsonaazụ mbụ nke 2019 anyị, anyị nọ n’iru imecha ọrụ anyị iji bulie ihe atụ amụma ndụ uru nke Medicare na, yabụ, nyere ego anyị, dozigharị EBITDA yana ego sitere na nha arụ ọrụ, nke wepụrụ nke a mmetụta dị mma sitere na mgbanwe anyị mere na atụmatụ anyị. Derek ga-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara mmelite ndị a na ihe atụ amụma amụma ha na mmetụta ha na nsonaazụ ego anyị.
N'ime afọ zuru ezu, eHealth mepụtara ego sitere na $ 506.2 nde ma ọ bụ 101% uto kwa afọ, gụnyere mmetụta ezigbo ego m nwetara ugbu a m kọwara. Nhazi EBITDA nke 2019 rụziri bụ $ 133.2 nde, 296% uto kwa afọ, ego ntanetị GAAP bụ $ 66.9 nde, gụnyekwara nhazigharị nnata ego. Ego mbata kwata nke anọ bụ $ 301.7 nde, ego ntanetị GAAP bụ $ 88.8 nde na EBITDA agbaziri bụ $ 142.6 nde, na-egosi uru ọzọ. N'ile anya n'ihu, anyị na-atụ anya usoro ike siri ike anyị wuru n'ime afọ abụọ gara aga ka ọ gaa n'ihu ruo 2020.
Anyị na-atụ anya ịga n’ihu ịbawanye uru azụmaahịa site na ịgbadobe usoro njikọ aka ọhụụ dị iche iche, gosipụtara ebumnuche ndị ahịa na njiri mara ọgbọ anyị. Na etiti oge, ntuzi aka anyị nke afọ 2020 na-akpọ maka mmụba ego nke 30% na esonyere mgbasawanye akụkụ EBITDA, gụnyere ezigbo nsonaazụ site na nkwalite ya na ụdị MA LTV nlereanya na nsonaazụ 2019 anyị. Derek ga-ekwupụta ụfọdụ n'ime isi echiche ndị dị na nduzi anyị n'okwu mmeghe ya. N'ihu ogbugbu ahụ, anyị na-eme atụmatụ itinyekwu aka na ikpo okwu anyị, na-ekwusi ike na ịdị mfe na nghọta nke ahụmịhe ndị na-ere ahịa n'ịntanetị.
Ebumnuche anyị maka 2020 bụ iru ntinye aka 34% sitere na ngwa ahụike ndị isi ọgwụ rubere n'ịntanetị. Ugbu a, m ga-aga nyefee n’aka onye isi n ’ego gbasara ego, Derek Yung.
Derek Yung - Onye isi ego na onye isi ala
Ekele dịrị m, Scott na ehihie ọma, onye ọ bụla. Na oku nke oge a, aga m agafe nsonaazụ ego anyị na 2019 wee nye anyị nduzi nke afọ 2020. Nsonaazụ ego nke anọ nke anọ na nke afọ 2019 zuru oke na-egosipụta mmezu siri ike anyị na itinye ego dị ukwuu na ikike telesales metụtara Medicare na atụmatụ ahịa n'afọ niile ka anyị na-aga n'ihu na-azụ ahịa azụmahịa Medicare, na-enweta ego siri ike na ntinye aha ka anyị na-agbasawanye akara. Nsonaazụ anyị tinyekwara nsonaazụ nkwalite emere amụma amụma amụma uru nke ga - enyere anyị aka ịkọ atụmatụ nke ndụ anyị nke ọma.
N’agba nke anọ, anyị na onye ọrụ mgbakwunye na-ahụ maka ọrụ na-arụ ọrụ iji mata usoro anyị dị ugbu a ma tinye ngwaọrụ ndekọ ọnụ ọgụgụ iji bulie izi ezi nke atụmatụ uru uru Medicare gbakụtara na-ekwusi ike na mmezi amụma njigide otu anyị. Site na ntinye aka nke ASC 606 maka nnata ego, nchikota ego anyi na atumatu atụmatụ Medicare nwere, n'ozuzu ha, gafere onu ahia mbu nke atumatu nke ndu anyi n’adabere na ya, na-egosi nkwuputa nke uzo anyi. Ike a enyerela aka n'oge gara aga maka nnabata nke ọnụ ọgụgụ ezumike ma ọ bụ ọdụ na-esite n'aka ndị otu Medicare Advantage akwadoro tupu oge eruo. N'otu oge, anyị nwere oke ihe anya na oke n'oge ntinye aka nke ọdụ ahọtara.
N'okpuru ihe nlere a, anyị na-enyocha ego maka ihe fọdụrụ na nkeji iri na ise mgbe anakọtara ọrụ niile dị na otu ndị otu Medicare Advantage. O nwere ike isi ike ịkọ oge usoro nchịkọta nke ikpeazụ ahụ. Ihe nlere anyi karie ka elebara anya banyere amuma a. Cedkpụrụ agbakwunyerela ugbu a nke anyị mejuputara na-eji usoro ihe atụ nke Kaplan-Meier gbanwetụrụ agbanwe karịa na -echekwa afọ abụọ na-agagharị agagharị maka ebumnuche ịkọwa njigide ndị otu Medicare.
A na-atụ anya na ọ ga-ebute ngbanwe dị ala nke atụmatụ uru uru ndụ anyị na-eweta ma nyekwa maka amụma amụma ego maka ezumike. Anyị jikọtara data akụkọ ihe mere eme niile dị na ihe atụ ahụ na nnukwu ibu etinyebere na nyocha afọ atọ kachasị ọhụrụ iji melite izi ezi nke atụmatụ ndụ anyị. Forwardga n’ihu, anyị ga na-enyocha ma na-edobe ego ezumike na mkpokọta atụmatụ atụmatụ Medicare ọ bụla mgbe enwere njiri siri ike ndekọ ọnụahịa ọ gaghị ebute nkwụghachi ụgwọ ego n’ọdịniihu. Ugbu a, maka atụmatụ Medicare Advantage, nke a ga-abụ ihe dịka afọ atọ site n'oge edebanye aha.
Afọ atọ bụ ihe dị ka afọ ndụ nke atụmatụ Medicare Uru anyị na-egosipụtakwa akara mgbe nke ahụ gasịrị anyị na-ahụ mgbanwe dị ukwuu na njigide nchedobe maka ndụ ndị ọrụ na-ezumike. Nsonaazụ nke ego nke anọ nke anọ na-egosipụta mmetụta $ 42.3 nde nti ego sitere na mgbanwe mgbanwe na atụmatụ ego ndị ọrụ kompeni na-atụ anya maka atụmatụ Medicare Uru ebe ọ bụ na anyị malitere ire ụdị ngwaahịa a na kwa ụzọ n'ụzọ atọ nke 2019. Nchịkọta ọnụ ụzọ anọ nke nkeji 2019 na-akpata metụtara Atụmatụ ịba uru Medicare bụ $ 50.8 nde. Ọ dị mkpa iburu n’obi na ewezuga mmetụta dị mma sitere na nkwalite Medicare Advantage LTV nlereanya, eHealth gosipụtara n’ụzọ dị ukwuu ego anyị na-enweta n’afọ 2019, ego GAAP na-agbanwezi na nduzi EBITDA.
Ma ugbu a, m ga-elele nsonaazụ afọ ofufo na nke afọ 2019 zuru ezu. Na azụmaahịa Medicare, ego ụzọ n'ụzọ anọ anyị bụ $ 282.6 nde. Ewezuga mmetụta $ 42.3 nde site na nkwalite nke uru ndụ Medicare bara uru, ego ụzọ anọ nke Medicare bụ $ 240.3 nde, nke na-anọchite uto afọ 98% na afọ. 2019 nweta ego Medicare 447 zuru ezu bụ $ XNUMX nde.
Ewezuga mmetụta nke nkwalite nke ụdị MA LTV, ego anyị na-enweta na Medicare zuru afọ bụ $ 404.7 nde ma ọ bụ uto nke 92% tụnyere afọ gara aga. Ntinye a siri ike sitere na njikọta nke ndị ọrụ Medicare akwadoro na mmụba na ego ndị na-abụghị ọrụ, ọkachasị, ego sitere na mmemme mgbasa ozi atụmatụ Medicare. N’otu ụzọ n’ụzọ anọ nke 2019, ngalaba Medicare wepụtara uru nke $ 149.3 nde. Ewezuga mmetụta dị na nkwalite nke MA LTV nlereanya, uru nke Medicare bụ $ 107 nde, mmụba nke 82% tụnyere afọ gara aga.
Maka afọ zuru ezu na 2019, uru nke Medicare bụ $ 155.2 nde ma ọ bụ $ 112.9 nde, ewepu nsonaazụ ahụ site na nkwalite usoro MA LTV. Onu ogugu onu ogugu ndi otu ndi Medicare na eme ka ndi mmadu nweta ego di $ 711,000 na njedebe nke ano nke 2019, site na $ 487,000 na njedebe nke ano nke 2018 ma obu ịrị elu 46%. Dịka Scott kwuru, ndị otu Medicare na-eto eto na-eto nke ọma tupu edebanye aha Medicare n'ozuzu dịka CMS si kọọ. Ọ ga-amasị m ịkọ banyere mgbanwe nke akparamagwa oge ndụ nke ndị otu Medicare anyị.
N'ime nkeji nke anọ, anyị na-anọgide na-ahụ mgbanwe dị mma na ọnụego njigide maka ndị ọrụ Medicare Advantage cohort nke anyị debara aha ndebanye aha kwa afọ na nkeji nke anọ nke 2018 yana ntinye ọnụego ndị ọrụ dị elu na 2019 ma e jiri ya tụnyere 2018 na ezigbo mmetụta site na nkwalite. ka ihe nlere amuma anyi. Nke a nyere aka na mmụba 2% na nkeji nke anọ yana mmụba 5% na afọ 2019 Medicare Advantage LTV ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Nke anọ na nkeji iri anọ na Medicare ịgbakwunye LTVs abụọ ejiri 6% gbadata dịka nke 2018. Ọ bụ isi ihe kpatara nke a jiri ntakịrị mbelata akwụkwọ njigide dị n'akwụkwọ azụmahịa a.
Akụkụ anọ nke nkeji iri n’afọ 2019 n’aka ndị mmadụ, ezinụlọ na obere azụmaahịa bụ $ 19.1 nde, mmụba 44% ma e jiri ya tụnyere otu afọ gara aga. Ego ndị mepere emepe n’afọ 2019 na mpaghara a bụ $ 59.2 nde, mmụba 45% ka atụnyere 2018. Reba mba n’enwe ego na-ebu ụzọ dị elu site na ebumnuche dị elu maka atụmatụ onwe anyị na nke ezinụlọ na ngwa ngwa, yana nsị ma ọ bụ ọdụ site na nke anyị ndị dị adị na ndị otu ezi-na-ụlọ nọ adị. Nke a mebiri nke ukwuu site na mbelata nke ọnụ ọgụgụ ndị otu a nabatara na ndị mmadụ n'otu n'otu, obere ndị ọchụnta ego na ngwaahịa nwere mgbakwunye dị ka anyị na-aga n'ihu na-elekwasị anya na itinye ego anyị na azụmaahịa Medicare.
Onwe onye, ​​ezi na ulo azụmaahịa gara n’ihu nwere uru dị na nkwụsi ike, na-eweta uru nke $ 23.4 nde maka afọ zuru ezu yana $ 8.3 nde maka nkeji anọ nke anọ n’afọ 2019. Atụmatụ anyị n’otu n’otu na ebumnuche ezinụlọ n’otu ngwụsị nke anọ. bụ ihe dịka 128,000, gbadara 15% ma e jiri ya tụnyere ndị otu anyị mere mkpesa na njedebe nke anọ nke otu afọ gara aga. Onu ogugu nke ndi otu n’ile ahia di obere bu ihe ruru 43,000 na njedebe n’afọ, mmụba 9% ma e jiri ya tụnyere otu afọ gara aga. Ego nile ha nwetara maka nkeji nke anọ bụ $ 301.7 nde.
Ewezuga mmetụta $ 42.3 nde site na nkwalite nke MA LTV nlereanya, ụzọ nke anọ ụzọ anọ bụ $ 259.4 nde, mmụba nke 92% ma e jiri ya tụnyere ụzọ anọ nke afọ 2018. Retụ ego maka afọ zuru ezu nke 2019 bụ $ 506.2 nde. Ewezuga nsonaazụ site na nkwalite nke MA LTV nlereanya, ego maka afọ zuru ezu nke 2019 bụ $ 463.9 nde, mmụba 85% ma e jiri ya tụnyere 2018. Ugbu a, m ga-enyocha mmefu ọrụ anyị na ọnụego uru.
N'afọ 2019, anyị nyefere mgbasa ozi bara uru maka afọ nke abụọ n'usoro. 2019 na-agbanwe akara EBITDA, ewezuga mmetụta dị mma nke nkwalite nke ihe nlereanya MA LTV, bụ 20% ma e jiri ya tụnyere 13% na 2018, na-egosipụta ntinye ọnụ ego echekwara ka anyị na-eto ntọala ego anyị. Gụnyere nsonaazụ nke nkwalite nke ụdị MA, ntanetị EBITDA 2019 anyị edoziziri dị 26%. N'otu oge ahụ, ọnụ ahịa azụmaahịa na-agbanwe agbanwe na otu onye akwadoro na azụmaahịa anyị na Medicare mụbara ka anyị na-etinye ego maka mbubata aha ngwa ngwa na mgbasawanye ahịa ahịa, na-eduga na ọnụego ndị dị elu maka atụmatụ ahọpụtara n'etiti ọwa na ibe anyị.
Onyinye buru ibu sitere na ọwa mgbasa ozi n'ịntanetị, nke, na nkezi, ọnụego nnweta dị elu, mekwara ka mmụba ọnụ ahịa ahịa nnweta. Ọnụ ahịa azụmaahịa nke 2019 na-agbanwe maka onye otu Medicare akwadoro toro 11% ma e jiri ya tụnyere otu afọ gara aga. Nlekọta ndị ahịa na ịdenye aha na onye otu Medicare akwadoro toro 13% na 2019 ma e jiri ya tụnyere 2018. Ọ dịka ọnụ ahịa azụmaahịa, mmụba a kwa afọ na-egosi itinye ego anyị na-eto eto na azụmaahịa azụmahịa anyị.
Nke mbu, n’afọ 2019, anyị mere mkpebi ịnwe ọtụtụ ndị ọrụ n’oge obere ala nke abụọ na nke atọ wee bido zụọ ndị ọrụ ma zụọ ha n’oge mbido afọ tupu ebido ibido aha ha n’afọ nke nwere ebumnuche nke ịba ụba n’oge ha. oge ire ahia di nkpa ma nabata ihe ahia anyi n’oge edebara aha puru iche. Na mgbakwunye, n'oge ndebanye aha kwa afọ, anyị na-eweta ụgwọ ọrụ oge ọrụ n'oge oge olu dị elu ma hụkwa oge oge ogologo oge karịa, na-egosipụta mmụba nhọrọ na ịdị mgbagwoju anya nke atụmatụ Medicare Advantage. Na mmechi, ego ịdebanye aha maka ndị ahịa na 2019 gụnyere ụgwọ ndị metụtara mmeghe nke ebe etiti telesales ọhụrụ anyị na Indianapolis. EBITDA na-agbanwe agbanwe maka nkeji nke anọ nke 2019 bụ $ 142.6 nde, ma ọ bụ $ 100.3 nde na-ewepụ mmetụta ahụ site na nkwalite nke ụdị MA LTV, ma e jiri ya tụnyere $ 51.9 nde maka nkeji nke anọ nke 2018.
EBITDA nke afọ 2019 zuru ezu bụ $ 133.2 nde ma ọ bụ $ 90.9 nde ewepụghị nsonaazụ ahụ site na nkwalite nke MA LTV nlereanya, ma e jiri ya tụnyere $ 33.7 nde maka afọ zuru ezu nke 2018. Anyị gbakọọ EBITDA agbazi agbazi site na ịgbakwunye ụgwọ mmegharị, ụgwọ nnweta, ihe mgbakwunye. nkwụghachi ụgwọ, mgbanwe na uru ịdị mma nke mbata ụgwọ ọrụ, nnabata na ịre ahịa, gụnyere nnabata nke enwetara ego, ego ndị ọzọ na enweta na uru maka ụtụ isi na ego azụmaahịa GAAP anyị. Gụnyere nsonaazụ site na nkwalite nke MA MATVTV, nha n ’ụzọ anọ nke anọ nke 2019 GAAP bụ $ 88.8 nde ma e jiri ya tụnyere $ 26.1 nde na nkeji nke anọ nke 2018. Afọ 2019 afọ zuru oke nke GAAP bụ $ 66.9 nde ma e jiri $ 0.2 nde na 2018.
Ewezuga nsonaazụ site na nkwalite nke MA MATVTV, ego ụzọ anọ nke anọ na afọ 2019 ga-agbadata. Ihe nnofu ego nke anyi nke ato n’afo 2019 n’enweghi nsogbu di $ 56.8 nde dika nke juputara na nde $ 8.7 maka odi nke ano nke 2018. N’afọ 2019, ntughari ego n’enweghi ihe ojoo $ 71.5, n’egosiputa nnabata ego di elu na ntinye akwukwo Medicare. , nke gbara osooso na ntanetị na ntanetị na ntanetị na ntanetị nke anyị zipụtara na 2019. Ọ ga-amasị m ichetara gị na ka anyị na-akwụ ụgwọ ihe dị ukwuu na mmefu nnabata na otu nkeji iri na ise mgbe anyị na-ewepụta aha, ọtụtụ ndị na-ebu anaghị akwụ ụgwọ ọrụ mbụ metụtara na Ndenye aha n’oge ndebanye aha kwa afọ rue Jenụwarị n’afọ ọzọ mgbe iwu ndị ahụ ga-adị irè.
Mmetụta oge a, anyị na-agbagha usoro ego anyị na 2019. Dịka anyị keere òkè na ọkpụkpọ oku nke anọ n'otu afọ gara aga, na 2018, anyị hụrụ ụfọdụ ịkwụ ụgwọ ọrụ metụtara aha ndebanye aha afọ anyị na-abịa na mbụ karịa ka anyị tụrụ anya ya na obere pasent nke ịkwụ ụgwọ na-atụgharị gaa na nkeji ụzọ mbụ ma e jiri ya tụnyere usoro akụkọ ihe mere eme. Mmepe a nwere mmetụta bara uru na 2018 mana ọ nwere mmetụta na-adịghị mma na nhapụta ego anyị na arụmọrụ na 2019. Na Jenụwarị 2020, anyị natara ihe dị ka nde $ 59 na ntinye ụgwọ ọrụ metụtara ntinye akwụkwọ nke anọ nke 2019.
Mmefu ego nke isi obodo, tinyere ego eji sọftụwia emepụtara n'ime obodo, bụ ihe ruru nde $ 16.9 maka afọ niile. Ego anyị nwere bụ $ 26.8 nde, gụnyere ego amachibidoro, anyị enweghịkwa ụgwọ dị ịtụnanya. Anyị mechiri afọ ahụ site na iji ego nnabata $ 589. Ma ugbua aga m eweta nduzi nke afọ 2020 anyị.
Anyị na-ebu amụma banyere ego ha ga-enweta maka 2020 ịnọ na $ 580 nde gaa $ 620 nde na ego akwụ ụgwọ Medicare na oke $ 533 nde gaa $ 569 nde, yana ndị mmadụ n'otu n'otu, ezinụlọ na obere azụmaahịa nke ego ha na $ 47 nde ruo $ 51 nde. Anyị na-atụ anya na ego ego GAAP na ntanetị maka 2020 ga-adị na $ 68 nde ruo $ 83 nde. Anyị na-atụ anya na 2020 EBITDA na-agbanwezi ka ọ nọrọ n’agbata $ 120 nde rue $ 135 nde. A ga-elele uru ego 2020 nke Medicare ga-adị na $ 152 nde ruo $ 169 nde, na-atụ anya na uru onye, ​​ezinụlọ na obere azụmaahịa ga-adị na $ 17 nde ruo $ 18 nde.
Ọrụ ụlọ ọrụ, ewezuga ụgwọ akwụ ụgwọ dabere na mbata na nnabata ọnụ na mmezi, ga-adị na $ 49 nde ruo $ 52 nde. A na-atụ anya inweta ego GAAP na ọkara ga - abụ maka 2020 ka ọ bụrụ na $ 2.64 ruo $ 3.23 kwa òkè. Ego a na-abughi GAAP kwa uzo mbu maka 2020 ka aturu anya na $ 3.56 rue $ 4.09. A na-atụ anya na ego eji eme ihe na arụ ọrụ ga-adị nha $ 52 na $ 55 18 yana ego eji emefu ego maka ego ga-abụ nde $ 20 ruo $ XNUMX nde.
Na etiti oge, ntuziaka ego 2020 anyị na-egosi uto 29% ma e jiri ya tụnyere ego anyị na-enweta n’afọ 2019, ewezuga mmetụta dị mma $ 42.3 nde n'ihi nkwalite usoro uru ndụ Medicare. A na-atụ anya na uto a bụ isi uto Medicare na-eduga. Yiri afọ gara aga, ntuziaka 2020 anyị enweghị nkwalite ụkpụrụ ndụ Medicare. Dabere na etiti ntụzi aka nke EBITDA ntụzi aka anyị, anyị na-atụ anya iwepụta oke nke 21% na mgbasawanye ihe dị ka isi ihe ndabere 150 ka atụnyere ntụle EBITDA nke 2019 nke 20% ka ewezuga mmetụta dị mma nke $ 42.3 nde site na nkwalite nke ihe nlere MA LTV.
A na-atụ anya ịgbatị ebe a na-ebu ibu site na ịga n'ihu na ntinye ọnụ na ego anyị ka akwadoro. N'otu oge ahụ, anyị ga-aga n'ihu tinye ego maka uto na ikike ekwentị anyị na ịzụ ahịa yana nchịkọta ahịa na ndebanye aha ndị ahịa na-elekọta ndị ahịa na-etolite n'usoro kwekọrọ na uto ego 2020. N'elu nkwado nke onye otu nwere nkwado na azụmaahịa Medicare anyị, anyị na-atụ anya ịchụpụ ndozi na ndebanye aha nlekọta ndị ahịa na 2020 na ntinye aka sitere na ntinye aha ntanetị n'ụzọ zuru ezu na ntinye akwụkwọ Medicare, nwekwuo lelee site na ngwa ọrụ na-eweta ihu igwe na teknụzụ na njikwa. maka ịrụ ọrụ ọnụ ahịa siri ike na nke telesales nke mpụga. A na-atụ anya ịre ahịa onye otu Medicare akwadoro ka ọ nọrọ nke ọma n'usoro ọkwa 2019.
N’ikpeazụ, ọ ga-amasi m ịza ajụjụ gbasara etu esi ele anya n’afọ a. Anyị na-atụ anya ugbu a ụkpụrụ yiri nke ọma na ntinye pasent nke ọ bụla, ngụkọta ego kwa afọ dị ka nke 2019, na-ewepụ nsonaazụ site na nkwalite nke MA MA LTV nlereanya n'oge nkeji nke anọ nke 2019. Oge nke anọ ga-anọgide na-enye onyinye na-ezighi ezi na ego na ego enwetara site na oge ndekọ aha Medicare kwa afọ na Obamacare debanye aha oge oghe na-ere oge. N’oge mbụ nke 2020, anyị na-atụ anya ka EBITDA gbanwee dị ka nke ọma ma e jiri ya tụnyere nkeji mbụ nke 2019.
Achọrọ m ichetara gị na nkwupụta ndị a na nduzi anyị dabere na ngosipụta nke azụmahịa anyị ugbu a, atụmatụ anyị dị ugbu a, echiche na mkpebi ikpe, nke nwere ike ịgbanwe n'oge ọ bụla. Ihe anyị rụpụtara nwere ike ịdị iche n'ihi mgbanwe mgbanwe na atụmatụ anyị, echiche anyị, na ikpe anyị. Anyị enweghị ọrụ ọ bụla iji imelite ihe anyị kwuru ma ọ bụ nduzi anyị. Na mmechi, anyị kwụsịrị 2019 na ndetu siri ike, na-ebuga arụmọrụ ndekọ n'oge oge ndebanye aha kwa afọ na ịgbasa òkè anyị na ahịa Medicare.
Ugbua anyi n’acho n’iru iga n'ihu n’atumatu ego anyi n’iru n’iru n’iru n’iru n’iru n’iru n’ime onwa Mee n’aho n’aho n’aho n’aho n’aho n’a n’uche. Site na nke ahụ, m ga-atụgharịghachi ya maka onye ọrụ maka ajụjụ.
[Ntụziaka maka onye ọrụ] Ajụjụ mbụ gị sitere na Jailendra Singh nke Ebe E Si Nweta.
Jailendra Singh - Credit Suisse - Onye nyocha
Chaị, ụmụ nwoke. Daalụ nke ukwuu. Ọ ga-amasị m ịghọta nke ọma ihe 29% ị na-ekwu maka usoro uto n'afọ karịrị afọ. Ihe m na - ekwu bụ, ọ bụrụ n’ị pụọ na ọnụọgụ 42.3%, mana ọ bụrụ na inyocha nkwalite niile na ụdị LTV, olee etu uto isi nweta ego ga-ele anya site na 2019 ruo 2020? Nke a ka bu 29% onu ogugu? Ana m agbalị ịghọta nke ahụ.
Ee. Yabụ Jailendra, ezigbo ajụjụ. Yabụ na 29% kwụsịrị etiti nke ntuzi aka bụ ntụnyere maka ego 2019, ewezuga $ 42.3 nde.
Yabụ ị ga - ewepu 42.3% ka ị ga - ewepu 50.8%? Onu ogugu ogugu ogha ogha 2020 adigh kwa uru obula site na ntinye nke odide - n'okpuru nkwalite ohuru a
Jailendra, na ntuzi aka 2020, ego a na-enweta na ntinye anya na atụmanya maka nnata ego na azụmaahịa Medicare, mgbe ị wepụrụ nde $ 42.3, ga-adị larịị.
Ọ dị mma. Mgbe ahụ m ga-achọ ịghọta nke ọma ihe maka ịrị elu na ọnụọgụ ntinye aha ntanetị, mmụba mara mma dị egwu site na 22% na 36%. Nke ahụ kwesiri inyego oke ezigbo ọfụma karịa ihe ị kọrọ n'ezie. Onwere ihe n’uzo na-akpali ndi ahia ahia gi nke n’enweghi ike ihule uru zuru oke nke itinye ntaneti n’enweghi ntinye aka? Agba ọ bụla na nke ahụ?
Ee, ọ bụ ezigbo ajụjụ, Jailendra. Yabụ na n'ime mmụba ahụ, dịka Scott kwuru na nkwadebe ya, enwere ihe abụọ mejupụtara. Otu gburugburu ndebanye aha na ntanetị, ebe enweghị mmekorita ya na ndị ọrụ ịkpọ oku, nke bụ ụdị a m chere na ị na-ekwu maka ya, wee nye aka na ntinye akwụkwọ ntanetị ebe onye ga - erite uru ga - anọ na oge ịbanye na ndị na - ere ahịa na ụlọ ọrụ ọkpụkpọ. mechara mechaa ngwa ahụ n'ịntanetị. Na ha abụọ, anyị na-ahụ ihe ndị ahụ dị ka ahụmịhe ndị ahịa dị mma na ntinye aha ntanetị nke enyere aka, ọkachasị, bụ otu ebe ndị mmadụ ga-enwe ahụ iru ala ma chọọ ntakịrị enyemaka karịa, mana bụ ikike na-enye ha ohere inwe ike wepụta oge ma mee mkpebi n’ikpeazụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịga n’ihu itinye akwụkwọ anamachọihe ahụ.
Anyị na-ahụ mpaghara ahụ dịka mpaghara uto na ikwe ka ndị ahịa anyị nweta ahụmịhe nke ntanetị ma nyere anyị aka n'ezie itinye aka ndị ahịa n'ụzọ dị oke mkpa site na usoro ịntanetị.
Dave Francis - Onye isi ndị ọrụ
Jailendra, ọ bụ Dave Francis. Ihe ọzọ ị ga-echebara echiche bụ na anyị na-aga n’ihu itinye ego uru ma ọ bụrụ n’ịzụlite azụmaahịa ahụ. Na unassisted online akụkụ nke azụmahịa, ebe enweghị mmekorita ya na onye na-ere ahịa, anyị na-etinye ego, dịka anyị kwurịtara mgbe niile, ego ahụ iji mee ka azụmahịa ndị ọzọ baa na ọwa n'ịntanetị. Yabụ dị ka azụmaahịa ahụ si eto uto, ee, anyị ga-enweta uru na-abawanye uru site na uru uru, mana ugbu a, anyị na-ewere uru ahụ na-abawanye ma na-amịghachi ya na uto ọzọ na azụmaahịa iji nweta ihe ndị ọzọ. ọnụ ọgụgụ.
Nke ọ bụla, anyị na-elekwasị anya mgbe niile iji hụ na anyị na-anya ahịa dị oke mkpa, dịka ị nwere ike ịhụ na mpaghara EBITDA na-agbasawanye, na-elekwasị anya na uru, n'agbanyeghị na anyị na-etinye ego na oke uto nke azụmahịa ahụ. .
Ọ dị mma. Ma mgbe m na-ajụ ajụjụ ikpeazụ. Uche obula banyere ngbanwe ego gi na oge ị ga - eji bulie onu ogugu gi nke ga - enyere gi aka banyere ya? O yiri ka ị ga - ebulite isi obodo ruo oge ụfọdụ. Naanị na-eche etu anyị siri chee n’eche maka oge ahụ.
Ee, ezigbo ajụjụ. Anyị nwere isi obodo zuru oke n'etiti ego na mpempe itule na ohere iji nweta ntughari iji kwado atụmatụ uto nke akọwapụtara na nduzi anyị. Ọ bụrụ na anyị ekpebie itinye ego na uto, anyị ga -achọ nkwado, anyị nwekwara ọtụtụ nhọrọ iji mee nke ahụ. Otu n'ime nhọrọ ndị ahụ nwere ike ịbawanye oke nke ngagharị, nke anyị mere nke ọma Q4 gara aga.
Ajuju gi ozo buru site na George Hill nke Deutsche Bank.
George Hill - Deutsche Bank - Analyst
Ndewo, ụmụ nwoke. Aga m eme ka a ga - asị na m nwere amamihe nke ịghọta ihe nlere Kaplan-Meier mgbe m jụrụ mmadụ ole na ole n'ime ajụjụ ndị a.
Anyị maara na ị nọ, yabụ amaara m na ị chọrọ igwu n'ime nke ahụ.
Achọpụtara m, mana ikekwe, ọtụtụ n'ime ajụjụ ndị ahụ ga-agbanye n'ahịrị. Echere m, nke mbụ, ị nwere ike ikwu maka ihe LTV gaara abụ na Q4 n'okpuru ụkpụrụ ochie ma ọ bụ tupu mmezi ahụ?
Ọ gaara adịtụ ntakịrị ma ọ bụghị ọdịiche ihe onwunwe n'ezie. Yabụ na usoro agbakwunye - abamuru nke ihe atụkwadoro ekwesighi iji nweta LTV dị elu. Ọ bụ inye anyị ihe ndekọ mgbakọ na mwepụ ma mee ka anyị nwee obi ike na anyị nwere ike mata ego sitere na ihe anyị chọpụtarala ma kwuo na mbụ gburugburu mkpokọta ego dị elu karịa atụmatụ mbụ.
Ọ dị mma. Nke ahụ na-enye aka. Na mgbe ahụ a na m eche otu n’ime ihe ebe ụmụ ụnụ ji too nnomi anyị nọ na Med D, nyere na Med D bụ ụdị ngwaahịa na-agbanwe agbanwe karịa MA. Echere m na ị nwere ike ikwu naanị maka ịdị omimi ebe ndị ụmụ nwoke na -echekarị na-ekere òkè na akwụkwọ azụmahịa Med D ma ọ bụ too Med D - na-etolite Med D n'ụzọ ọ naghị egosipụta uto ahịa nke ngwaahịa a. ?
Yiw, George, ne Dave. A ga m aza ya otu a. Anyị na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ngwaọrụ anyị tinye n’ahịa ahịa iji nyere ha aka ikpebi atụmatụ kachasị mma maka ha. Ọtụtụ n'ime ihe ahụ metụtara ọgwụ ndị ha takeụrụ.
Yabụ na ọ dị n'akụkụ MAPD ma ọ bụ naanị n'akụkụ nke D, ndị ọrụ anyị na ngwaọrụ anyị dị n'ịntanetị maka ndị ahịa anyị na-ahụ ọtụtụ ndọrọndọrọ ndọta n'ebe ha nọ n'ihi na ọ na-enyere ndị mmadụ aka ime mkpebi nwere ọgụgụ isi karịa ihe ha kwesịrị ịzụ. Yabụ, ka anyị na-etinyekwu ego na mpaghara teknụzụ ahụ, echere m na anyị ekwuola banyere eziokwu ahụ bụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke azụmahịa Part D a na-eme n'ịntanetị, ekwenyeghị na anyị na-ahụ uru nke itinye ego ahụ. kwụọ ụgwọ na usoro nke ndị ahịa na-esokwa na mmụba dị oke n'akụkụ akụkụ azụmahịa ahụ.
Ọ dị mma. Ana m eche na nke ikpeazụ tupu mụ amaba na ya bụ ụmụ nwoke enyelarị nduzi maka afọ a, unu ekwuritala ihe banyere ego nnweta na Q1. Enwere nkọwa ọ bụla ị nwere ike ịnye maka ụdị ọrụ MA ị na-ahụ na Q1, dịka ọ na-emetụta churn ma ọ bụ ndị ọhụrụ na-abanye n'ụgbọ? Mana enwere ụdị mmasị - m na - ekwu na anyị ma na ntụzi aka a adịghị, ụdị mmasị dị na ike a ị na - ahụ.
Ọrụ a bụ, aga m asị, na atụmatụ. Ejiri atụtụ anya na anyị nwere maka Q1 a wee bụrụ ihe anyị hụrụ n'afọ gara aga, nke bụ na enwere ndị mmadụ ga-eji ohere ha mepe emepe aha iji me ka ha nwee ike ịgbanye n’ime onye ahịa ha chere na ọ ka mma. maka ha. Yabụ na anyị nwere abamuru nke ịche echiche nke Q1 afọ gara aga, ebe n'afọ gara aga, anyị ahụghị mgbe anyị na-ahụbeghị oge OE n'ime ogologo oge. Yabụ na anyị nwere ike itinye ego na ntakịrị ntakịrị karịa nke afọ a, mana n'ozuzu, m ga-ekwu na ihe na-achọ atụmatụ maka Q1.
Azụmaahịa ahụ siri ike, ma anyị nwere mmetụta dị mma gbasara ebe anyị nọ ugbu a.
Ọ dị mma. Aga m ehulata na kwụ n'ahịrị. Daalụ.
Ajuju gi ozo sitere na Greg Peters nke Raymond James.
Greg Peters - Raymond James - Onye nyocha
N'ehihie ọma. Echere m na nkwupụta gị kwadebere, ị kwuru banyere oge vaịn nke 2018 na njigide na-agba ntakịrị ntakịrị tupu atụmatụ afọ gara aga. Ma m na-achọ ịmata ihe ị na-eche banyere njigide njigide maka ntanetị nke 2019. N'iburu n'uche na ọ ka nnukwu ibu karịa vinịlị nke 2018, ọ dị ka ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe na-agbanwe agbanwe, mana ikekwe ị nwere echiche na nke ahụ.
Ọ bụ ezigbo ajụjụ, Greg. Anyị anaghị anwa ime ka anyị chee na ọ ga-agbanwe karịa, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị na-atụ. Site na ịkọ ịkọ na ịkọwapụta, afọ a, anyị nwere nlele site na afọ gara aga nke otu oge ndebanye aha na-emeghe na Q1 ga-esi banye na njigide ndị ahịa na churn. Nke ahụ bụ nnukwu mpempe akwụkwọ n'afọ gara aga.
Anyị mere ike anyị niile n'ịme atụmatụ nke ihe ọ ga - abụ ma itinye ego na ya, na afọ a, ugbu a site na ahụmịhe nke afọ gara aga, anyị nwere ike ịme nke ọma. Anyị na-eduzi LTV dị larịị. Na azu azu bu ihe itu n’uche na a gaghi enwe nd idibi isi na churn ma obu onodu ochichi anyi huru na Medicare n’aho 2020.
Ọ dị mma. Achọrọ m iche echiche ọzọ. Ikwurita maka onu ahia gi banyere otu onye enwetara, i wee kwuo - echem na ikwuru na ichere na ha ga adi ire na 2020 dabere na 2019. you nwere ike ikwu maka ụdị - ị nwere ike ikwu maka nka ịchọrọ ịkpa agwa? Ihe kpatara m ji ju ajuju bu na anyi nuru maka ihe ndi ozo ndi ozo n’ahia ka ihu ahia na enweta ugwo kari ahia gi.
M na-achọ ka gị na ụfọdụ ndị ụmụ mmadụ na-akọ akụkọ kwurịtara ahịa.
Ee. Ya mere ka m dokwuo anya ihe abuo ndi ozo. Dịka ị nụrụ nke ọma, na maka ndị ahịa Medicare na-agbanwe ọnụ ahịa otu onye akwadoro, anyị na-atụ anya na ọ ga-adị afọ karịa afọ. Anyị kwukwara na nkwupute ndị anyị kwadebere na anyị na-atụ anya na ndebanye aha ndị ahịa na-akwụ ụgwọ maka onye otu ọ bụla akwadoro ka ọ dịkwuo mma kwa afọ.
Na mkpokọta, maka P&L, anyị na-ekwu na maka azụmaahịa anyị na ahịa anyị na ndebanye aha ndị ahịa na-akwụ ụgwọ iji na-eto n'otu ụzọ ahụ. Yabụ ịnụ nke ahụ nke ọma. N'akụkụ ahịa, anyị ahụbeghị ihe ekwuru na-emetuta uto anyị. Echere m na nke ahụ pụtara ìhè na ọnụọgụ anyị.
Anyị ahụla ka asọmpi dị elu na ọwa dịka TV na-aza oku, asọmpi ahọpụtara maka anyị ka bụ ndị ọrụ ụgbọelu na ndị FMO. N’ezie, e nwere ndị na-ere ahịa ndị ọzọ dịkwa mma, mana n’ezie asọmpi a nke anyị na-ahụ ka ọ na-apụta karịa ọwa dịka DirecTV, n’ezie, ndị na-ebu ya na FMO. Ọzọkwa, n'ahịa, anyị ahụbeghị nke ahụ metụtara anyị n'ụzọ ahụ. Anyị nwere uru asọmpi na ahịa anyị na mmekọrịta mmekọrịta dị oke ọnụ.
Yabụ na anyị atụlela n'oge gara aga nke bụ ihe na-abawanye uru nye anyị. Anyị nwere mmekọrịta dị oke mkpa na ụlọ ahịa ọgwụ kacha, netwọọ ụlọ ọgwụ, ndị na-ebu ya na ihe ndị ọzọ. Sitekwa n'echiche inweta nnweta, ọ bụ mpaghara na, na nkezi, dị mma karịa azụmaahịa anyị. Ma ndị ọzọ karịa ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ bụ mpaghara anyị ga-ele anya itolite ngwa ngwa karịa ndị ọzọ site n'echiche ahịa.
Ọ dị mma. Ajuju nke ikpe azu gabu ima ihe igha ka odi elu na komputa gi, ma ugbua ma ugbua. You nwere ike ikwu maka - ma ama m na ị kwuru ụfọdụ n’ime nke a na nkwupute gị ọ bụla. You nwere ike ikwu maka ego akwụrụ ụgwọ nke ihe nnabata ahụ? Ma eleghị anya, nnukwu ibe ga-abụ noncurrent.
Enwere mmefu ọ bụla metụtara nke ahụ, ma ọ bụ ego ahụ dị ọcha?
Yabụ na nnata na komputa ahụ na-anọchi anya mkpokọta ego a ga-anakọta ya na kọmitii ndị anyị na-enweta n'aka ndị na-ebu maka iwu anyị nyere aka iji nweta ndị ahịa maka ha n'aha ha. Yabụ otu nke ahụ mere, ọ bụkwa ihe kpatara anyị ji amata ego anyị na-eme, a rụzuru ọrụ aka anyị, yabụ, anyị na-amata uru ndụ a niile bara. Site na ihe anyị na-arụ ọrụ, ndị ọzọ karịa iweghachite ego na-abata na ego a ga-akwụ anyị ụgwọ ka ọ bụrụ ndekọ na-ere ahịa, enweghị ego ndị ọzọ metụtara ya.
Enweghị ego na ya, Greg. Emefuola ego ya na oge, ma ọ bụ ego ka ị ga-anakọta ya na akwụghị ụgwọ ọ bụla.
Na ajụjụ gị ọzọ sitere na Frank Morgan nke RBC Isi Ahịa.
Frank Morgan - RBC Capital Markets - Nyocha
N'ehihie ọma. Naanị otu - ngwa ngwa di na nwunye na-elekọta ụlọ. Gini bu akuko ogugu eji enyere gi aka?
Nde 25.7, juputara kpamkpam.
Ọ dị mma. N'ihe banyere uto na ntinye aha na-akwadoghi ma nyere aka na ntanetị, ị nwela oge ị chọpụta ihe njigide dị na ụdị ọrụ azụmahịa gị ogologo oge?
Frank, anyị eleela nke ahụ anya n'oge gara aga. Anyị ahụbeghị ndọpụ ndị dị mkpa n'ozuzu ha dabere na mmadụ bụ telephonic, ọnweghị ntanetị ma ọ bụ nyere aka n'ịntanetị. Site na nke ahụ, dịka ị nụrụ n'okwu ndị a kwadebere, anyị nwere mmụba dị ukwuu na ngwa ntinye aka n'ịntanetị nyeere aka. Yabụ na nke ahụ bụ ihe dị ọhụrụ, ma o dochaghị anya iji nwee ike ịhụ na ịkọ amụma ọdịiche ọ bụla.
N'inye ntughari mgbanwe na nzaghachi nke ndị ahịa na ahụmịhe ahụ, ọ ga-eju anyị anya ma ọ bụrụ na ọdịiche dị na ya, ọ bụrụ na ọ dị, ọ ga-akacha mma.
Ee. Frank, ihe ị ga-eburu n'uche banyere ndebanye aha ntanetị ndị a nyeere aka bụ na ngwaọrụ anyị etinye n'aka ndị ọrụ ahụ, na-enye ohere ka ndị ọrụ ahụ nyefee ndị ahịa ntinye aha ntanetị n'ịntanetị. site na ntụgharị ederede, bụ ngwa ọrụ dị iche anyị, bụrụkwa ihe na-ewulite ntụkwasị obi dịka anyị siri hụ na ndị ahịa ka ha na-eme mkpebi ha. Yabụ na ọ dị ntakịrị maka ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị a igosipụta ụdị ọ bụla nke ezipụ iche na ụkpụrụ njigide ihe akụkọ. Mana nyere ntụgharị dị elu nke anyị na-ahụ mgbe ejiri ngwaahịa ndị ahụ na ihe anyị kwenyere na ya bụ ntụkwasị obi dị elu na mkpebi ịzụta onye ahịa, anyị na-eche na ọ nweghị ihe dị na ya ma ọ bụrụ na ọ ga-anọgidesi ike na akụkụ nke akwụkwọ ahụ. metụtara ihe anyị hụbara na telephonic dị ọcha n'oge gara aga.
Nwetara gị. Mgbe ahụ echere m na ị kwuru na ego ọdụ ahụ ị na-atụ anya na ọ ga-adị larịị. Gịnị bụ ego ha nwetara?
Yabụ maka afọ zuru ezu, Medicare, ee, nnweta nke Medicare bụ $ 55 nde, yabụ nke ahụ gụnyere $ 42.3 nde. Yabụ na nke fọdụrụ bụ $ 13 nde, ọ dịkwa larịị na ntuziaka na-aga n'ime 2020.
Ọ dị mma. Na ime ka o buru - otu a ka $ 42.3 nde, a na - enweta ezigbo ego ahụ? Ma ọ bụ nke ahụ…
Ọ dị mma, ọ bụghị ego natara na ọnụọgụ ọnụọgụ. Ọ bụ ntụgharị anya anyị, ihe a na-atụ anya ịnakọta n'aka ndị ahịa ahụ.
Ọ dị mma. Mgbe ahụ echere m, n’ikpeazụ, nanị ụfọdụ mkparịta ụka anyị na ụfọdụ ndị na - ebu, ha ekwuola maka uru atụmatụ dị iche iche nke ndị ọzọ nwere. Na-achọ itinye ntinye ha n’ezie banyere ịchụ ahịa ụfọdụ, kamakwa mmetụta ntinye na atụmatụ atụmatụ. You hụrụ nke a? Ihe a na - eme na ahịa gị ọ bụla? Ichere ya - kedu ihe ị chere ga-adịte aka ga-eme gị, ọ bụrụ otu? Daalụ.
Ee. Frank, anyị anaghị enwe ọtụtụ mkparịta ụka banyere atụmatụ atụmatụ kwa se na ndị anyị na-ebu ụgbọ. Anyị na-eji oge dị ukwuu soro ndị anyị na ha na-ebu ụgbọ mmiri na-ekwu banyere ihe anyị na-ahụ n'akụkụ dị iche iche nke ahịa. Anyị na-etinyekwa ihe pụrụ iche n'ime ahịa Medicare Uru ahịa, ọkachasị, ahịa Medicare n'ozuzu, dịka ọ na-emetụta usoro ịbịaru ahịa na ụdị nhọrọ anyị na-ebuga nakwa na anyị na-enweta nnukwu ozi na nnukwu ihe ndabere n'ofe ahụ. mba dum dika onye na - eme ihe site na ihe omuma banyere ihe di elu na echiche di onu ahia.
Yabụ na anyị ga - enwe ike isoro ndị na - ebu ma soro ha nwee nghọta nke na - enyere ha aka ịbanye n’afọ na - esote na - eche ntakịrị nghọta karịa etu ha chọrọ isi bịaruo ahịa dị iche iche. Mana dịka ọ metụtara ịkọwapụta atụmatụ na ihe anaghị adị na ndị mmekọ, ọ na-ewerekarị ozi anyị na-enye ha wee banye ma rụọ ọrụ igbe ha. Ma ọ bụ akụkụ nke mmekorita nke anyị na ha nwere ma ọ bụghị ọtụtụ itinye aka na imewe, mana n'ezie itinye aka na akụkụ ọgụgụ isi.
Ajuju gi ozo bu nke sitere na Dave Styblo nke Jefferies.
Dave Styblo - Jefferies - Onye nyocha
Ndewo, ebe ahụ. N'ehihie ọma. Daalụ maka ajụjụ ndị a. Nke mbụ bụ na ị ga na-agbakọ azụ na ngụkọta ọnụ ọgụgụ.
Echere m na unu ụmụ nwoke na-achọ ime okpukpu abụọ ahụ na '19, ma eleghị anya, unu mere ya na ntakịrị ihe karịa nke ahụ bụ nsonaazụ nsonazụ ahụ. Enwere m agụụ ịmata, ị nwere ike ịnye anyị mmelite maka atụmatụ gị maka ịnwe ego na uto na ndị ọrụ ekwentị, ma ụmụ nwoke ma ọ bụ metrik nke anyị nwere ike iche maka ndị ị na-apụ apụ, na otu ị ga-esi na-eji nke ahụ ka ịgbanwee gaa na ala na kedu nke uto ahụ na-atụnyere isi uto ụtụ isi?
Ee. Yabụ Dave, anyị agaghị enye ọnụ ọgụgụ ndị akọwapụtara ugbu a ọnụ, mana enwere m ike ịnye gị ntakịrị ụcha. Yabụ na afọ a gara aga, anyị etinyeghị ego na mkpokọta mkpokọta dị elu karịa ka ha dị na 2018. Anyị weere ihe ịga nke ọma anyị nwere na ihe ngosi dị na 2018 ma lelee nke ahụ karịa na ọnụ ọgụgụ ndị nnọchite anyị na19.
Anyị agbatịkwara ikike ime anyị site na ebe a na-ere ahịa Indianapolis, yana ịgbatị ma n'ọfịs Gold River na Salt Lake City. Ka anyị na-abịaru nso n’afọ a, anyị na-ele anya n’ihu n’ihu ịgbasawanye iji were ohere ahịa toro nke anyị na-aga n’ihu n’ihu n’ihu n’ihu, anyị ga-eji ikike bulie ike nke ime na nke mpụga n’ụzọ ga-enyere anyị aka. , dị ka Derek kọwara, iji weda ọnụ ahịa nke mgbata nke ndị ahịa n'akụkụ ọnụ ahịa azụmaahịa, akụkụ CC&E, site na ịbụ ntakịrị ihe ndị ọzọ kachasị ekwu banyere otu anyị si eji ngwakọta nke ihe dị na mpụga, nghọta anyị ga-enwe, Na mkpokọta mgbakwunye, ndị ọrụ karịa, ọkachasị ka anyị na-abanye na nkeji nke anọ nke afọ a.
Ọ dị mma. Na naanị ịghọta nghọta nke nchịkwa, ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na enwere ohere n’ahịa ka ị ga-aga obere, ị ji okpukpu abụọ karịa afọ gara aga ma enwere ike nweta nkwado maka ihe ị na-eme, kedu ihe ị ga-eji okpukpu abụọ karịa ma ọ bụ bulie ya 50%? Ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ka ị tụọtụ ntakịrị na ijide n'aka na ị gaghị ebute ihu igwe gị Ka enwere ihe akụrụngwa ike ọzụzụ ị ga - echebara ka ị na - eto ngwa ngwa?
Ee. Echere m, ọ bụ nguzozi n'etiti ọnụ ahịa na ijide n'aka na anyị ga-ejikwa azụmaahịa ahụ ka o wee too dị ka o kwere mee na-enweghị imebi ya. Anyị kwurịtara n'afọ gara aga banyere eziokwu ahụ bụ na anyị chọrọ itinye ọtụtụ efere na njedebe nke ọ bụla na-enweghị ịbupu igwe ahụ, mana enwere ọnụ ọgụgụ nchịkwa na-enweghị nchịkwa nke nzukọ ahịa dị ukwuu ka anyị na-eto ya. Ma ọ dị, n'eziokwu, onye na - amachi ọnụego ruo mgbe anyị ga - enwetakwu azụmahịa na ịntanetị ma hapụ igwe ka ọ rụọ ọrụ niile.
Ike anyị nwere site na ma ọnụ ahịa ma otu aka azụ iji zụlite azụmaahịa ahụ dịka o kwere mee na-enweghị imebi ya bụ ihe anyị maara nke ọma. Yabụ ka anyị na-elele - m ga-asị, dịka ị na-elele ntuziaka anyị wepụtara n’afọ gara aga na otu anyị siri rụọ ọrụ megide ya, ọ bụ otu ụzọ ahụ etu anyị si eleba anya n’ahịa ahụ n’afọ a.
Na Dave, Aghọtara m ajụjụ gị. Echere m na enwekwara oge maka ya. Anyị etinyewo nduzi anyị. Mana dị ka anyị mere n'afọ gara aga, anyị ga-aga n'ihu na-atụle ihe anyị na-atụ anya itinye ego na Q4 ka anyị na-abịaru nso maka mmụba ọ bụla anyị na-ahụ na teknụzụ anyị yana naanị ihe niile anyị na-ahụ dị ka ohere iji nwetakwu ahịa. emechaa n’afọ.
Ọ dị mma, nnukwu. Na mgbe nke a ga-abụ na ikpeazụ site na mgbasa mgbasa dị n'akụkụ. A maara m unu ụmụ nwoke ịchọrọ imelite atụmatụ ga-adịte aka oge ụfọdụ. Mana ịnọ ọdụ gburugburu 21%, 22% oke, oke ehi gị ga-erute 35% na 2023.
Achọgharịrị m, ị dị njikere ikwu banyere onye ikwu gị ebe ị chere na ị nwere ike ịga? Ànyị nọ n'ụzọ? Eleghi anya ị na-etinye ego itinye ego ugbu a iji too usoro dị elu, mana olee otu anyị ga-esi chee maka oke nke mgbasawanye oke ala na oge na-aga n'ihu?
Ee. Ya mere agwara m na anyị ga-arụ ọrụ nyocha nke afọ ise ka emechara n'afọ a dịka anyị mere n'afọ ole na ole gara aga. Banyere otu anyị si arụ ọrụ na '19 ma e jiri ya tụnyere atụmatụ ogologo oge nke anyị bipụtara n'afọ gara aga, n'akụkụ ụzọ anyị si enweta ego, anyị bụ afọ zuru ezu tupu atụmatụ ahụ. Na mpaghara EBITDA, anyị nọ n'etiti etiti afọ na afọ na-eso ya, yabụ na anyị ezughi afọ zuru ezu.
Mana site n'echiche EBITDA dollar, anyị na-abịa n'ihu afọ zuru oke. Yabụ ihe ị na-ekwu n'ozuzu bụ ka anyị na-eto n’ike ọsọ ọsọ nke anyị tụrụ anya na enyere ya ohere n’ihu anyị, anyị na-etinyekwu ego na ya. Na ụdị nke mgbako, na oke pasent, anyị anaghị eru ebe ahụ. Mana n'eziokwu, anyị na-ebuga ego dollar EBITDA nke anyị ga-atụ anya ya, anyị abụrụkwa afọ zuru ezu tupu nke ahụ.
Ajuju gi ozo sitere na Mike Newshel nke Evercore ISI.
Mike Newshel - Evercore ISI - Onye nyocha
Daalụ, ee. Eleghi anya ị ga - ekwu maka mkparịta ụka maka onye na - ahụ maka gị, ị nwere ike ị kwuo naanị maka arụmọrụ onye na - ere ahịa mpụga na AEP yana ihe kpatara nrụpụta dị oke mma karịa ntuzi aka mbụ? Ọ bụ naanị nchedo ka ọ bụ nchịkwa ụzọ algorithms ka ọ mere nke ọma? Po nwere ndị na-eri ego ma ọ bụ ụfọdụ ndị na-ere ere nke rụrụ ọrụ nke ọma karịa ka ị tụrụ anya ya?
Enwere njikọta nke ndị niile ahụ. Echere m na anyị abanyero na echiche nlegharị anya iji jide n'aka na anyị anaghị ebufe ikike anyị iji ebe ahụ. Mana n'ezoghị ọnụ, arụmọrụ nke ndị na-apụ apụ weghaara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị na oge irere AEP. Ọtụtụ n'ime nke ahụ metụtara na ngwaọrụ anyị ebubatara n'ụlọ ọrụ ahịa niile, ma ndị nke ime ma na mpụga, ndị ọrụ ọhụrụ na-enwekwu ahụ iru ala ma nwee nkà na ụzụ.
Nke ahụ, yana eziokwu ahụ bụ na azụmaahịa na akụkụ azụmaahịa nke azụmaahịa, na-aga n'ihu na-adọga azụmaahịa dị elu n'ime ebe ndị a na-ere ahịa. Ha niile gbakwunyere ọnụego ntụgharị nke dị n'ihu na anya anyị. Anyị nwere obi ụtọ na arụmọrụ onye ọ bụla, ma ndị nke anyị na ndị ọzọ.
Aghọtakwara m na ị naghị agwa anyị ndị ọrụ ole ị na - agbakwunye, mana ebe ọ bụ na ị nwere ọtụtụ ndị ọrụ ọhụụ na afọ a na - alaghachi, nduzi na - eche na ndozi arụpụtaghị ọfụma ọ bụla na ntọala ndị dị adị?
Ntụziaka ahụ nwere otu ụdị arụmọrụ sitere n'aka ndị ọrụ anyị niile.
Ajuju gi ozo sitere n’aka George Sutton nke Craig-Hallum.
George Sutton - Craig-Hallum Capital Group LLC - Nyocha
Daalụ. Amaghị m ma ọ bụrụ na anyị na-ahapụ Scott ịza ajụjụ, mana a ga m ajụ ajụjụ yiri ka m na-enweta n'aka ndị na-azụ ihe, ya bụ, George, ọ bụrụ na agbagharaghị m ngwaahịa a na akụkọ ahụ, m chọrọ iji lebara ajụjụ anya site n'ụzọ dị n'usoro ahịa ị nwere ma na ntanetị na ntanetị nke ahịa ị chere na ị nwere ike nweta n'ọtụtụ afọ na-esote, ọkachasị nyere na echiche 2019 gị ga-aga n’ihu inweta oke uru.
Ee. Ehee, George, ekele maka inye m ohere ka m kwuo ihe. Anyị ka nọ na mmalite nke ike ijide, anyị na-agba egwu gburugburu ebe a, mana iji tinye echiche dị nkọ na ya, akwụkwọ anyị nwere ugbu a na-emetụta nduzi anyị. Anyị chọrọ iduzi n’isi obodo anyị nwere ike ịnọchite anya na anyị nwere ohere inweta ruo taa.
Anyị kwenyere n'ahịa a, anyị nwere ike ịbanye ya nke ọma ma ọ bụrụ na anyị nwere ego ka ukwuu, anyị ga-elele nke ahụ ka anyị na-abanye n’afọ. Dị ka Dave na Derek si kwuo, afọ amalitela. Anyị ebidola ime atụmatụ. Anyị eburula ụzọ iduzi anyị, anyị nwekwara ọtụtụ ihe mere anyị ga-eji chee na a ga-elekọta òkè anyị na-abawanye.
Anyị na-eche na anyị bụ mmalite nke mgbanwe ego site na ịzụta Medicare gafee tebụl kichin gaa telephonic mbụ ma ugbu a telephonic na-enyere aka n'ịntanetị na ntanetị na-enyere aka na telephonic na mgbanwe na-abawanye na ịntanetị zuru oke. Anyi na ewere onodu a maka uzo ato nke oma, o noo na mgbe obula m na azumahia ndi n’ile ahia m n’agba oso n’onye zute ndi ahia ebe ha no. Ma anyị chere na anyị mere nke ahụ. Anyị etinye ego n'ihu ndị na-azụ ahịa, n'ihe gbasara teknụzụ teknụzụ anyị na ahụmịhe onye ahịa anyị n'ịntanetị, mana ọ na-abịakwute anyị ugbu a.
O bu ya mere anyi ji enwe oke ike banyere uzo osooso anyi na abawanye megide ahia n’onwe ya, kamakwa mgbasawanye gburugburu. Anyị na-eche na anyị nwere nnọọ ọnọdụ.
Nke ahụ nyere aka nke ukwuu. Yabụ otu ajụjụ ndị ọzọ metụtara nsogbu nchọta Medicare na-esite na Q4 pụta. Onu ogugu ndi ahia anyi enweghi obi uto na-abia na Medicare.gov. Ana m achọ ịmata ihe ma ọ bụrụ na ịnwere mmemme a kapịrị ọnụ iji nwaa ndị folks a na oge ọhụrụ ma ọ bụ gbasawanye aha ndebanye aha na Q1.
Ee. Azịza dị mkpirikpi bụ ee, yana nnukwu oghere, mana anyị amachaghị ndị mmadụ bụ. O di nwute, anyi ga achoro ha ka ha welie aka ha. Anyị na-eche na ha apụla n'ọma ahịa ịchọpụta ụzọ anyị.
Ma laghachi na otu n'ime ajụjụ ndị mbụ, ekwenyere m na nke ahụ bụ akụkụ nke ihe dọtara ụfọdụ arụmọrụ anyị na ntanetị azụmaahịa, na nnukwu ahụike yana na akụkụ azụmahịa D. Mana eziokwu ahụ ka dị na akara NPS anyị, dị ka Scott kwuru na mbụ na telephonics n'akụkụ, ka nọ na 80s, 90s dị ala. Anyị na-ahụkwa nnukwu uto na ntanetị azụmahịa nke ndị ahịa na-aga na weebụ, ha na-achọta afọ ojuju na ngwa ọrụ na ikike ha nwere ịdebanye aha na ikpo okwu anyị.
Zuru okè. Daalụ.
Na ajụjụ gị ọzọ sitere na Tobey Sommer nke SunTrust.
Irube isi Sommer - SunTrust Robinson Humphrey - Onye nyocha
Daalụ. Dịka anyị na-elele atụmatụ gị iji bulite nrụpụta na oke, ị nwere ike kparita nnukwu atụmatụ gị maka '20, nke, na nghọta m, nwere ike ịgụnye ịrụ ọrụ na ọpụpụ na-apụtaghị ìhè, yana iji ụfọdụ atụmatụ itinye ego na ọdụ data. na nyiwe nke nwere ike idi obere oge ọ na - ewe iji wee debanye aha gị na ekwentị wee mee ka ahụmịhe ndị ahịa ka mma?
Ee. Ya mere Tobey, anyị ekwuola ọtụtụ ihe banyere eziokwu ahụ bụ na ma n'akụkụ ndị mmekọ ma tinye ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ n'ọma ahịa na-enweta ozi ndị ahịa, data ndị ọzọ akọwapụtara maka ndị ahịa ọ bụla iji mee ka ndị ọrụ anyị ma ọ bụ ikpo okwu dị n'ịntanetị nwee ike. na-enye ntupe esemokwu na-enweghị atụ na nke zuru oke nke ihe ahịa kachasị mma maka onye ahịa ahụ iji mee ka ha gaa ebe ziri ezi ngwa ngwa ma dị mfe site na atụmatụ atụmatụ na itinye aha, ọ bụ akụkụ dị mkpa maka anyị. Otutu n’ime ulo oru ego teknụzụ nke Derek zoro aka na ya n’okwu ya metụtara nke ahụ. Kedu otu anyị si ejikọkwu ọnụ na ndị anyị na ha na-azụ ahịa na ụlọ ahịa ọgwụ, mmekọ ọnụ na ahịa ahịa ọrụ ego na-abawanye? Kedụ ka anyị si enweta data ndị ahịa site na ngwaọrụ dịka Blue Button ma kedu ihe ị ga - enwe ike ịmatakwu banyere ndị ahịa anyị iji mee mkpebi na usoro ntinye aha ahụ dị mfe ma nwekwuo obi ike maka ha? Nke ahụ bụkwa akụkụ dị mkpa maka anyị, ọ bụkwa mpaghara anyị chere na anyị nwere nnukwu ụzọ n'ọma ahịa ma nọgide na-etinye ego iji gbasaa ma jigide ụzọ ahụ.
Ajuju ajuju banyere ma m nwere ike. N'ihe banyere uru nke ị na-ewere n’ahịa a, ị nwere nghọta maka ma ha na-esite n’aka ndị na-ere ahịa ndị ọzọ ma ọ bụ na ụlọ ọrụ nlekọta ha n’onwe ha ma ọ bụ nchikota ha abụọ? Daalụ.
Anyị chere na ha na-abịa si karịa ndị na-ere ahịa azụmaahịa.
Ajụjụ gị nke ikpeazụ bụ site na Lisa Springer nke Singular Research.
Lisa Springer - Nnyocha otu - Onye nyocha
Daalụ. Ajuju m gbasara ngwa a na-akwadoghị na nke enyemaka enyere aka n'enweta na ntanetị nwere usoro dị mma na nke ahụ. Na-ele anya, kwuo, n'ime afọ atọ ma ọ bụ ise ma ka ị na-ewulite usoro teknụzụ, olee otu anyị kwesịrị isi chee maka pasent ahụ na-ele anya? Do chere na ị ga-ahụ akwa elu ụlọ n’oge ụfọdụ ọ ga-esiri gị ike ime ka ọ dị elu karịa, kwuo, 50% ka 70% nke ngwa ahụ?
Yabụ na arụpụtara ya na ntuziaka anyị na 2020 na ntinye uche anyị n'ịntanetị maka ngwa niile na Medicare ga-abụ 34%. N'ime nke ahụ, enwere mmụba na ntinye aka na ntanetị na-enyere aka na ntanetịghị. Na ajụjụ gị, ma è nwere akwa eke, ọ dị mma ma dị mma ka anyị jụọ ajụjụ n'ime. N'ụzọ doro anya, enwere usoro dịka ndị mmadụ na-eto eto na Medicare, bụ ndị nwere ọgụgụ isi kachasị arụ ọrụ, ha ga-enwe nnukwu ike maka iji ngwaọrụ ndị dị n'ịntanetị.
Site na nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na inyocha atụmatụ site na njikọ ọrụ na nka na ụzụ anyị, ha dị mma. Ha adịghị nke kachasị mma na klaasị ahụ mgbe ị na-elele ụlọ ọrụ ndị ọzọ tozuru etozu na e-azụmahịa. Yabụ na ngwaahịa na teknụzụ anyị siri ike na ọbụlagodi usoro nke ụwa na gburugburu ndị mmadụ na-aka nká, enwere ndozi anyị ga-eme na ike anyị ijide ndị mmadụ na ntanetị ọzọ, enyere aka na ndị na - etinyeghị.
Ee. Na Lisa, enwere ike inwe uko ụlọ ebe ụfọdụ. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụ igwe mmadụ na ihe dị mgbagwoju anya nke ngwaahịa na-enyefe onwe ya ịchọ enyemaka ọzọ. Site na nke ahụ, anyị na-etinye nnukwu ego iji tinye ngwaọrụ ndị ahụ - ọtụtụ ngwaọrụ ndị ahụ enwere ike n'aka ndị ahịa.
Ihe ọzọ dị ebe a bụ na anyị - n'ime, ihe dị ka otu afọ na ọkara gara aga, anyị setịpụrụ ebumnuche dị oke egwu. Anyị nwedịrị ndị e dere T-shirts ndị kwuru na iri ise na ise, nke kwesịrị inwe 50% nke ndị debara aha anyị n'ime afọ ise iji gaa n'ịntanetị. Anyị hụrụ na dịka otu n'ime ntutu ntutu buru ibu ndị a nwere ike ịgaghị anabata ya mana anyị ga-achọ ya maka ebumnuche ọ bụla na ụzọ anyị si eso, anyị ga-aga ebe ahụ ngwa ngwa karịa ka anyị tụrụ anya na mbụ. Yabụ na anyị nwere obi ụtọ n'ezie na traktọ nke na-enyere aka na okporo ụzọ na-anaghị agbado ụkwụ nke anyị na-ahụ.
O gosiputara ike na odi iche nke ikpo okwu anyi. Dịkwa ka Derek na Scott kwuru, anyị ga-aga n'ihu tinye oke ego na nke ahụ iji jide n'aka na ndị ahịa nwere ihe ha chọrọ na aka ha nke ọma site na ngwa ọrụ na ntinye aka ma were uru dị iche iche gbasara uru anyị na ya.
[Onye ntinye aka ọrụ]
Oge: 65 nkeji
Kpọọ ndị na-eso ụzọ:
Nyocha nyocha nke EHTH
Ihe nchoputa nile nke ndi mmadu choro
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2020/02/21/ehealth-ehth-q4-2019-earnings-call-transcript.aspx
Akwụkwọ akụkọ 20am nke February 21, 2020 - VIDI